Maxay qabanayan guddiga ku shiri doona Baydhaba? - Caasimada Online
Home Warar Maxay qabanayan guddiga ku shiri doona Baydhaba?
Maxay qabanayan guddiga ku shiri doona Baydhaba?
Baydhaba (Caasimada Online) – Inkastoo uu baaqday shirkii ay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ku yeelan lahaayeen guddi farsamo oo ka kooban maamul goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka, kuwaas oo u sii gogol xaari lahaa gollaha wadatashiga qaran, si xal u helida khilaafka ka taagan doorashada dalka, hadana waxaa su’aal la iska weydiinayaa “Maxey qaban doonaan guddiga ku shiri doona magaalada Baydhabo”
Guddigan oo uu magacaabay ra’iisul wasaaraha dowladda federaalka, Maxamed Xuseen Roble, kana kooban 14 xubnood ayaa ah mid daba socda shirkii maalma kahor ka dhacay magaalada Samareeb ee u dhaxeeyay dowladda federaalka, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka oo k dhammaaday is-afagard waaga.
“Shirkan wuxuu daba socdaa shirkii wadatashiga qraana ee ooga hadlay arrimaha doorashooyinka, guddiganna wuxuu turxaan bixin ku sameyn doonaa arrima fara badan, wuxuu u gogol xaari doonaa shirka ay madaxda isugu iman doonta, iyagoona ka doodi doonaa waxyabaa badan oo la xiriir arrimaha khilaafka doorashooyinka kahor inta aysan madaxda isugu imanin shir”, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed, Ilyaas Saciid oo la hadlay BBC-da.
Waxyabahaa kasoo baxa shirka ayuu wasiirka sheegay in wixii ay isla meel dhigaan ay u gudbin doonaan dowlad goboleedyada, kadibna madaxda dowlad goboleedyada ay usii gudbin doonaa madaxda dowladda federaalka.
“Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii hore oo lagu baaqay inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo kan waa guddi farsamo”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka.
Kullankii qaar kamid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ku dhexmaray magaalada Samareeb ee Galmudug ayaa fashil ku dhamaaday kadib markii la isku mari waayay qoddobo ay kamid tahay sida doorashada ay uga dhaceyso gobolka Gedo, maadaama uu maamul ahaan katirsan yahay Jubaland balse ay gacanta ku heyso dowladda federaalka.
Haddase waxaa muuqata in wadahadalada loo wajhaayo si ka duwan sidii hore, maadaama kullamadii hore ay isa soo hor frriisan jireen madaxad labada dhinac, balse hadda guddigan ayaa filayaa inay sii jilciyaan arrimaha khilaafka uu ka taagan yahay ee doorashooyinka, kuwaas oo marka ay wax isla meel dhigaan loo gudbin doona madaxda ay matelaan, si loo saxiixo kadibna loo meel mariyo.
Arrintan ayaa timid kadib markii ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi farsamo oo ka shaqeeya qabanqaabada Shirka golaha wadatashiga qaranka, six al looga gaaro khilaafka harreeyay doorashada.
Dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe cadaadis iyo baaqya kala kulmayay beesha caalamka iyo gollaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, kaas oo ah inay ka wadahadlaan khilaafka ka taagan doorashooyinka, dalkana ay ka dhacdo doorashada wada ogol ah inkastoo dib u dhac ku yimid wakhtigii la qorsheeyay.
ISHA: BBC SOMALI + CAASIMADA